Indlu ye-Rustic kunye nesitayela sothando, enikezelwe ngendlela elula kodwa esebenzayo kubahambi abavela kwihlabathi liphela.
Indlu isecaleni kwendlela yebhayisekile iSinistra Po (Eurovelo 8) ilungele abathandi bokhenketho lokuhamba ngebhayisikile.
Ifakwe kwindawo ezolileyo kakhulu le ndlu ijikelezwe yigadi enkulu emalunga ne-3000 square metres etyalwe iindwendwe.
I-5 km ukusuka kwi-Museo della Giostra di Bergantino (Ro) ekhethekileyo e-Itali, i-6 km ukusuka kwi-Archaeological Museum eSan Pietro Polesine (Ro).
Ngeebhedi ezininzi ezikhoyo, le ndlu intle ifanelekile kulo naluphi na uhlobo lomhambi.
Igumbi ngalinye linendawo yalo yabucala, enoba niliqela labahlobo okanye niyintsapho enkulu. Ixabiso eliphantsi, nangona kunjalo, lenza ukuba lilungele abahambi abangatshatanga kunye nezibini.
Igumbi "Azzurra" Igumbi eliphindwe kabini kunye nebhedi ethi "Queen Size" (190x162) i-wardrobe encinci yohlobo lweengcango ezi-2 ezinama-hangers, emva komnyango kukho i-hanger yempahla eludongeni. Kukho ithuba lokufaka ibhedi enye, xa kuceliwe.
Igumbi " Del pescatore " kunye neebhedi ezi-2 ezingatshatanga, i-wardrobe encinci uhlobo lweengcango ezi-2 ezixhotywe ngama-hangers kunye namanqanaba ahlukeneyo "enkxaso".
Igumbi lokuhlambela elibanzi, libonelela ngendawo yokuhlambela, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, i-sanitary epheleleyo, ukufudumeza, isomisi seenwele, ukongeza kwisibuko seklasikhi, kukho nesibuko "i-makeup enwebekayo". Kukho amacandelo ahlukeneyo apho unokugcina khona izinto zakho zobuqu.
Ukongeza kwiitawuli zobukhulu obahlukeneyo uya kufumana amashiti, iingubo kunye nayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kugqibelele. Kukwakho nekhitshi eliquka: I-oven yeMicrowave, isitovu sombane, isinki, ifriji encinane enefriji, iipleyiti, iiglasi, izinto zokucheba namalaphu etafile.
Kwigumbi lokudlela / ekhitshini kukho i-intshi ye-TV ye-intshi ye-22 ene-digital terrestrial kunye nomgca we-WiFi kunye ne-modem ye-TPlink yamahhala engenasiphelo.
Ngaphandle uya kurhangqwa yipaki etyaliweyo emalunga ne-3000 square metres efumaneka kwiindwendwe. Kwindawo yeendwendwe kukho iitafile ezixhotyiswe ngeeambrela kunye nezitulo, izihlalo zokuhlala kwindawo yokutshaya, ezinokuthi zifikeleleke ukusuka kwipaseji encinci phakathi kwegumbi lokuhlambela kunye negumbi elinye lokulala.
Indawo yangaphandle ngexesha lasehlotyeni iphathwa rhoqo yipropati kunye ne-anti-mosquito unyango ukuze kuqinisekiswe ukuhlala kakuhle kwepaki ngexesha lokuhlala.
Kukho iibhayisekile ezifumanekayo kwiindwendwe ukuze zisetyenziswe simahla. Kukho idiphozithi yokhuseleko yokusetyenziswa kwabo.
Ukurenta abakhenkethi: M0290130001
Indawo ethi "Dormire al Fiume" ikufuphi nendlela ye-Sinistra Po cycle (Eurovelo 8). Kufuphi nathi, kuqukuqela umlambo omkhulu we-PO kwaye sijikelezwe yi-poplar groves kunye nohlaza oluninzi olujikelezayo. Isisombululo esifanelekileyo kwabo bathanda indalo, ukuzola, kwabo bathanda ibhayisekile kunye nabo bathanda ukutyelela iindawo ezinomdla kwimbali nakwinkcubeko, sithweswe isithsaba yiMantua, iVerona, iLake Garda, iRovigo, iFerrara kunye neelali zamandulo Colli Euganei. Yonke into kukuhamba iyure ukusuka apha.
Kuyo nayiphi na into eyenzekayo uPaola onakho, kunye noncedo, kuba ehlala kwindlu esecaleni, uya kukuvuyela ukukwamkela buqu ngexesha lokuNgena. Ikwafumaneka inkonzo Whatsapp (ngaphandle ebusuku) apho unokubuza nawuphi na umbuzo ezifana: njani ukuvula umoya womoya, okanye yintoni na yokutyela ilungileyo kwindawo. Undwendwe lunokuthi, ngokuvumelana noMbumbi, wenze ixesha lokungena elahlukileyo ngokuthumela umyalezo kaWhatsapp.
Kuyo nayiphi na into eyenzekayo uPaola onakho, kunye noncedo, kuba ehlala kwindlu esecaleni, uya kukuvuyela ukukwamkela buqu ngexesha lokuNgena. Ikwafumaneka inkonzo Whatsapp (ngap…